organique gluten maimaim-poana lentil maitso fusilli - China organika gluten maimaim-poana lentil maitso fusilli Supplier,Factory -Qianna
organique gluten maimaim-poana lentil maitso fusilli
Organic soybean fusilli lentil maitso na ny fanaka lentil maitso sy ny rano. dia maro ny fahasalamana soa.
1. Lower kolesterola
Voanemba manampy mba hampihenana ny ra satria misy kolesterola ambaratonga avo ny mety levona fibre. Fampidinana ny kolesterola haavon'ny Mampihena ny mety-po sy ny tapaka lalan-dra aretina amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalan-dra madio.
Maro ny fanadihadiana dia nampiseho fa avo fibre mihinana sakafo masaka toy ny Mampihena ny mety ny aretim-po. Voanemba lehibe ihany koa loharanom-folate sy manezioma, izay be mpandray anjara am-po ara-pahasalamana. Folate mampihena ny fankamamiantsika ny homocysteine ​​haavon'ny, antony lehibe mety ho aretim-po. Manatsara manezioma ra, oksizenina sy zavatra mahavelona manerana ny vatana. Low tahan'ny ny manezioma no mivantana mifandray amin'ny aretim-po, ka mihinana voanemba hiaro ny fonao sambatra!
3. tsy fahalevonan-kanina Health
Mora mampivaingana fibre sakafo hita ao amin'ny masaka dia manampy hisorohana ny fitohanana sy ny fandevonan-kanina aretina toy ny tsinay mora narary, aretin'ny sy ny diverticulosis.
4. Voahozongozona Blood Sugar
Manampy ny maro mahasoa ny fibre, mety levona fibre fandrika gliosida, lasa miadana kokoa fandevonan-kanina sy ny filaminana ra haavon'ny siramamy. Izany dia mety ho tena manampy ho an'ireo amin'ny diabeta, insuline fanoherana na hypoglycemia.
5. tsara proteinina
Ny legioma rehetra sy ny voanjo, voanemba omby ny fahatelo-ambony indrindra ambaratongam-proteinina. 26 isan-jaton'ny lentil ny kaloria no voalaza fa proteinina, izay mahatonga azy ireo tena tsara ho an'ny loharanon-proteinina Tsy mpihinan-kena sy ny vegans.
6. dia mampitombo Energy
Voanemba mitombo tapaka, mahari-mirehitra angovo noho ny fibre sy sarotra gliosida. Voanemba ireo tsara koa loharanom-vy, izay mpitondra oksizenina mandritra ny vatana sy ny fanalahidin 'ny hery famokarana sy metabolism.
Na voanemba Anisan'ny mahasoa rehetra ireo zavatra mahavelona toy ny fibre, proteinina, mineraly sy vitaminina, Mbola kely izy ireo eo amin'ny kaloria ary saika ahitana sabora akory. Iray kapoaka ihany no masaka masaka dia mirakitra momba ny 230 kaloria, fa mbola mamela anao hahatsapa ho feno sy afa-po.
Length(manaiky customization habe)
Mora mampivaingana sakafo fibre
Total sakafo fibre
Fangaro: voajanahary soybean vovoka, rano
organique gluten maimaim-poana soybean spaghetti
gluten maimaim-poana Vegan vary fotsy paty